RW Rooble oo la kulmay mMadaxda Dowlad Goboleedyada Soomaliya. - Iftiin FM
RW Rooble oo la kulmay mMadaxda Dowlad Goboleedyada Soomaliya.
by Iftiin FM Reporter July 25, 2021
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya iyo Madaxda Dowlad Goboleedyada ayaa waxay manta ka hadleen arrimo ku saabsan doorashooyinka Soomaaliya.
Ra”iisul Wasaare Rooble iyo madaxda Dowlad Goboleedyda oo ku wada hadlay khadka zoomka xalay, ayaa sheegay in kulankani diiradda lagu saaray dar-dar gelinta arrimaha doorashooyinka, arrinta Soomaaliland, hergelinta soo jeedinta guddiga dib u heshiisiinta Gedo iyo xalinbta wali ka jira doorashada Soomaaliya.
Ra’iisul wasaarihii dalka Ivory Cost Xaamid Bakayoko oo geeriyooday.
Madaxda Dowlad Goboleedyada ayaa ku kala aragti duwan arinta Soomaaliland sida ay inoo xaqiijiyeen masuuliyiin qeyb ka ahaa Shirka, kuwaas oo iyagu la kala safan labada garab ee Siyaasiyiinta Soomaaliland ka soo jeeda, ay kala hogaaminayaan Gudoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo Ra”iisul Wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed.
wadamada Armenia iyo Azerbaijan oo gaaray Heshiis xabad joojin ah.
Kulankaan ayaa kusoo aadayo xilli dib u dhac uu ku yimid Doorashada Senatarada Aqalka Sare BFS oo waqti ahaan loo asteeyay 25-ka July 2021 oo maanta ku began in ay lagu qabto Magaalooyinka Muqdisho, Jowhar, Dhuusamareeb, Garoowe, Baydhabo iyo Kismaayo.
MD Farmajo oo joojiyey awoodaha RW Rooble.
Iftiin FM Reporter September 16, 2021
Kooxda Taalibaan oo ka hadashay qaraxi kabul .
Iftiin FM Reporter September 16, 2021 September 16, 2021
Madaxweynaha Koonfur Galbeed oo kala hadlay Arrimaha doorashooyinka Beesha Caalamka.
Iftiin FM Reporter June 19, 2020
Iftiin FM Reporter August 21, 2021
Iftiin FM Reporter January 28, 2021
Xiriirka FA-ga England oo farta ku fiiqay xiddiga Edinson Cavani
Iftiin FM Reporter December 17, 2020
Iftiin FM Reporter September 12, 2020